salon ubuhle, futhi kungenzeka ukuhlela ekhaya. Buso, lotions, okhilimu, nama-ngisho walungisa kahle kakhulu ngaphansi kwezandla izithelo etholakalayo kanye amajikijolo, imifino, ubisi nemikhiqizo yalo. Into esemqoka - lokunquma ukuthi uhlobo isikhumba sakho futhi ukumbamba kweshumi zokupheka ephumelela kunazo.
Ikhukhamba - omunye izithako ethandwa kakhulu izimonyo ukulungiswa ezihlukahlukene imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba. It moisturizes kahle, whitens, amathoni, ikakhulukazi lihambisana namanye izingxenye simila. Kodwa ngaphambi kokuba ngiqhubeke ukwabelana imfihlo indlela yokwenza ikhukhamba elangeni ekhaya, ngingathanda nokufanelekile ukudonsela ukunakekela ladies ku ehilelekile ezinjalo. Izindlela ezinjalo wokulungiselela base oludakayo. Ngakho kufanele ukhumbule ngokushesha, "utshwala" ekwakhiweni ingaqukatha kusuka 6% kuya ku-30%. Kumele alingana uma ulungiselela induna eyeve eshumini nambili isikhumba elangeni ikhukhamba, inani lemali utshwala ingasetshenziswa ekhaya. Uma uhlela ukuyisingatha kanjani kubo nje oily noma othambekele isikhumba oily, kwanele 15%, esiphezulu - 19-20% of isamba ketshezi. Emnene kakhulu futhi ethambile ukuba indlela yokwakheka izidakamizwa abantu asebekhulile futhi athambekele isikhumba esomile. Kulokhu, utshwala (vodka) Lotion e ikhukhamba, ekhiqizwa ekhaya, uthele ayibi ngaphezu kuka-6%. Isetshenziswa njengesici zemifino eluhlaza kungaba izinhlobo ezahlukene. Yiqiniso, kufanele kube ngokwanele, ngisho noma kancane ubudala. Kodwa hhayi abolile, hhayi nevilaphayo.
Ukuze imikhiqizo yezimonyo izipho ofanele enempilo bemvelo, namanzi - kwaba ijusi okudingekayo kulesi simo. Lotion Yenziwe ukhukhamba ekhaya ngale ndlela: zonke izithako kahle sihlanzwe imifino abakwazi usike isikhumba. Kumelwe ukukuthinta phezu grater plastic (yensimbi oxidizes) bese ngokusebenzisa gauze oyinyumba eligoqiwe 3-4 izingqimba, sicindezelwe esitsheni esihlanzekile. I kwaphumela liquid abakhwabanisi. Kungcono ukubeka juice esimweni ngokushesha noma efakwa kwamahora ambalwa - kungekho - ku esiqandisini. Kungenjalo, it is ngqo ixubene ukwenziwa izingxenye zotshwala
Ungadliwa for zonke izikhathi
Futhi manje kabanzi mayelana sikhungo.
Ukuze ahlanze isikhumba, asuse fat ngokweqile, isinqandakuvunda umphumela esicasulayo ephelele elangeni ikhukhamba kanye vodka. Imifino (100 g) fake isiswebhu noma grate, ukugcwalisa esilinganayo vodka noma 40% utshwala, ikhava esitsheni futhi bagcizelele ngesonto endaweni emnyama. Khona-ke kube nzima futhi asebenzise njengoba kwakushiwo. Njengoba i ungeze tonic ingxenye kuyinto lemon ewusizo (izithelo grate, Cindezela ijusi Engeza elangeni).
Uma isikhumba esomile, kuyasiza moisturize onjalo izindlela engavamile: ukupheka 100g. ikhukhamba juice, ukushayela kuye isikhuphasha kweqanda, uthele isigamu inkomishi ukhilimu uwoyela aphakathi nendawo kanye isipuni izinga likagologo. Ingxube is kahle uphehle futhi, bese elicwengekileyo. Leresiphi for ikhukhamba elangeni kuyazuzisa futhi ewusizo ngoba kunika isikhumba fresh, ukubukeka ukhombise impilo, okwenza kube zibukeke abasebasha, ibuyisela kuyaqina. Ingxube kungaba futhi ugeze - esikhundleni insipho neminye yokuhlanza ejenti. I elangeni ezimbi zodwa - lilondolozwe isikhathi eside, ngakho-ke kungcono ukukwenza eziningi ezincane kanye esetshenziswa ngokushesha.
Mhlophe futhi kuqabule isikhumba ukhathele ekahle ikhukhamba juice nge boric acid. Vegetable grate. Ngo 2 wezipuni puree uthele isipuni acid futhi sekuqala ukufudumala kancane. elangeni afudumele, Sula ebusweni nasentanyeni. Khona-ke, gcoba kubo nge ukhilimu efanelekayo.
Ukuxoxisana ngama yasendlini Cosmetology, engeza e lotions decoction of chamomile, ukhova, celandine, rose, ezikhishwe of iparsley Aloe - bayindlu nomthelela nenzuzo ngesimo isikhumba sakho!
Mayelana nendlela ukusebenzisa othi awube
"Lacoste" - amakha yabesifazane. Incazelo, izithombe, izibuyekezo
Ambulensi ekhaya: ukhilimu for ukusha solar, ezishisayo kanye nezinye
Ukulungisa Powder-amabhola "Avon": ukubuyekezwa, imibala kanye izici isicelo
Church of SS uPetru noPawulu, Smolensk: incazelo kanye nezithombe
Recreation Centre "lufika Ungathuli" (Chelyabinsk) ngebhange yehlathi echibini
Powder Ihlangene futhi okuxekethile. Yikuphi okungcono?
Uchungechunge oluthi "izisebenzi": nabalingisi, ngesakhiwo
Isifo sesikhumba zamakati
Ingubo ukunakekelwa: lwezimpawu kanye nezincazelo zawo. Ukugeza, omiswe, ayina, yokuhlanza lochwepheshe
Izinwele Wezingane zingaba stylish!
"Alaska Original" - umthombo ukushisa yesithwathwa ezinzima